Ilhaan Cumar oo si Rasmi ah u Diiwaan Gelisay furriinka ninkeeda xilli lagu tuhmayo xidhiidh-Guur Nin Caddaan Ah – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalIlhaan Cumar oo si Rasmi ah u Diiwaan Gelisay furriinka ninkeeda xilli lagu tuhmayo xidhiidh-Guur Nin Caddaan Ah
October 8, 2019 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Soomaliya, Wararka maanta 4
Ilhaan Cumar oo ka tirsan Aqalka Wakiilada Mareykanka ayaa si rasmi ah maxkamad uga diiwaan gelisay codsi ah in laga furo ninkeeda, ahna aabaha saddexdeeda caruur, xiili ay jirto xan ku saabsan in xidhiidh hoose ay la leedahay nin degan magaalada Washington DC oo lagu magacaabo Tim Mynett.
“Waxaa xidhiidhka guurkeena gaadhay dhaawac aan dib loo bogsiin karin” ayaa ku qornaa warqadaha ay Ilhaan gaysay maxkamadda.
Ilhaan ayaa warqadaha ku sheegtay in iyada iyo Axmed midkoodna uusan dooneyn in midka kale laga ilaaliyo inuu dhowaado. Waxay sheegtay inay doonayaan in si isle’eg loogu ogolaaday haysashada iyo korinta caruurtooda.
Arrintan ayaa imaneysa iyadoo dhowr bil ka hor ay soo baxday in Ilhaan ay xidhiidh jaceyl oo hoose la leedahay Tim Mynett. Xaaska Tim, oo lagu magacaabo Beth Mynett ayaa sidoo kale bishii August maxkamadda ka codsatay in ninkeeda laga furo, kadib markii ay ogaatay xidhiidh uu la leeyahay Ilhaan.
Tim Mynett ayaa maxkamadda Washington DC ka diiwaan geliyey kiis uu ku beeninayo inuu xidhiidh jaceyl la leeyahay Ilhaan.
Tim ayaa ka shaqeeya urur qaabilsan doorashooyinka, taasi oo lacag ka badan 250,000 oo dollar ka heshay ololaha Ilhaan. Lacagtaas ayaa abuurtay su’aalo ku saabsan in shaqada uu Tim u qabtay Ilhaan aysan u qalmin, balse lacagta lagu siiyey xidhiidhka labadooda ka dhaxeeya.
Sida ku cad warqadaha ay maxkamadda u gudbisay Beth Mynett, ayada iyo Tim ayaa kala guuray bishii April kadib markii Tim uu qirtay inuu xidhiidh jaceyl la leeyahay Ilhaan.
Ilhaan Cumar ayaa diiday in illaa iyo hadda ay wax jawaab ah ka siiso warbaahinta xidhiidhka la tuhmayo inuu kala dhexeeyo Tim oo ah nin caddaan ah iyo furiinka ay diiwaan gelisay jimcihii ee ninkeeda Axmed Xirsi.
Marqaan Media maxa ka khaldan, war Anshaxa saxaafadda ilaaliya, Gabar somaliyeed oo sharaf leh dacaayad rakhiis ah ka fidin, Ninka cadaanka ah ee la sheegayo waa nin u shaqeeya ”’ congressional staff ”’ wuxuuna amarka ka qaata waa Congress woman ilhan omar.
Qof walba oo xildhibaan ah wuxu leeyahay afar qof oo u shaqeeya oo u diyaariya waxwalba oo loo baahan yahay. waxaan mushaaharo siiya Federal Budget office .
Hadday Naago Keliya qorota waxa la oran laha waa ”’ LESBIAN ”’ haday rag qoratana waxa la oranaya saaxiib bay la tahay ”’ ilaaahay amariis ”’ fara badana !!!
Ceeb…ceeb.. naag lagu khasaaray iga tuur..mar dambe u codnaynmaayo…
Ceeb…ceeb.. naag lagu khasaaray iga tuur..mar dambe u coddayn maayo…Islam mash haddii Gaal guursato…qoomamo codkaygii
War ninkii habargidirta aha ileen naagta waa garab
Ninkas cadanka ah aya naagta uhayeey oo maliin kasta
Ka tuumiijiray. Lol